Tuesday May 10, 2022 - 07:54:32
Madaxweynaha maamulka 'Somaliland' Muuse Biixi ayaa hadal dheer ka jeediyay Golaha Baarlamaanka Somaliland.
Khudbaddiisa oo meelo kala duwan taabatey haddana waxa indhaha lagu hayey doorashada soo socota ee 13 November 2022 iyo sida uu ka yeeli doono.
Maamulka ayaa shantii sanoba mar loo asteeyaa doorashadiisa, waxa aaney ahayd markii Biixi loo doortey xilka madaxweynenimo ee ‘Somaliland’ 13 November, 2017.
Mucaaradka ayaa iyagu ku adkaysanaya in doorashadu ku dhacdo xilligii loo asteeyay halka Muxaafidku doonayaan in dib loo dhigo isla markaana muddo kororsi loo sameeyo Muuse Biixi.
Waxa Muuse iyo qolyaha muxaafidka ahi la yimaaddeen doodda ah in ay sharci tahay xeerka furista ururradu isla markaana uu liisanku ka dhacayo saddexda xisbi ee hadda jira dabayaaqada sannadkan kaddibna dib loogu soo wada tartami doono masrax furan oo qofkastaa urur furan karo illaa laga soo reebo ugu aakhirka 3 Xisbi.
Tani ayaa lagu sheegay khudbadii ugu dambaysay ee uu jeediyo Muuse Biixi isagoo madaxweyne ah waxaana sugaya loollan culus oo dhanka siyaasadda ah.
Ururrada mucaaradka ah ayaa badanaa Nayroobi kula kulma waxa loogu yeedho Beesha Caalamka kuwaas oo marwalba labadooda u ah dhexdhexaadiye iyo kabiir siyaasadeed. Waxaana xusid mudan in ay lacago ku bixiyaan taabba galka dimuquraadiyadda oo ah sharci reergalbeed.
Maamulka dabadhilifka ah ee fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa ayaa sanadkan gorodda lagalay fatqalado siyaasadeed oo sababi gaaray in ay gacmaha iskula tagaan dhinacyada siyaasadda isku haya.
Dowladaha reergalbeedka ee taageera dhaqan xumada dimuquraadiyadda ee ka jira deegaannada 'Somaliland' ayaa dadaal dheeri ah ku bixinaya sidii loo qaban lahaa doorashooyin ku sheegyada.